Kedu ihe ga-enyere m aka ibuli ogo ngwaahịa m na Amazon?
A ghaghị ịmepụta ọrụ ọ bụla nke azụmahịa (ileghara ọdịdị nke ụlọ ọrụ ya anya) nke ọma site na ụfọdụ ngwaọrụ ma ọ bụ ihe ọmụma ndị e mere iji kwado ya. Na-agba ọsọ azụmahịa gị na Amazon ọ bụghị nhepu na nchịkwa a na-enweghị nchịkwa. Ma ọ bụrụ na ị na-enye onyinye maka ogo ngwaahịa gị na Amazon, isi ihe dị ebe a na-eme nke ọma iji jikọta na isi ihe - nke ahụ ga-adị mkpa iji mee ka ụgwọ gị dị ntakịrị dịka o kwere mee, ọ dịkarịa ala ruo oge ụfọdụ. N'ụzọ dị otú ahụ, ozugbo azụmahịa gị ghọrọ n'ezie uru, ọ bụ oge dị elu ị mụbaa arụpụta ọrụ ya na ego ya na-emepụta ohere maka ọbụna karị. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-egosi gị ụfọdụ n'ime ngwaọrụ m kachasị mma na ngwanrọ nke nwere ike inyere gị aka melite ogo ngwaahịa na Amazon ma nwee obi ụtọ na-ere ahịa oge na-aga. Lee ha.
Top Must-Have Services and Tools for Product Ranking on Amazon
Label Ndepụta Ngwaahịa
Ọ bụ ma eleghị anya ọrụ kacha mma maka ndepụta ngwaahịa na Amazon, ma ọ dịkarịa ala maka ibipụta aha gị n'otu n'otu maka ihe ọ bụla agbakwunyere agbakwunyere na ngwaahịa gị. Ndekọ Ndepụta Ngwaahịa dịkwa oke maka ịdebe ọ bụla SKY profitability ị na-eziga na Amazon. Kedu ihe ọzọ - ọrụ a bụ ihe ndekọ zuru ezu na usoro nlekọta akwụkwọ. Mana nke ahụ apụtaghị na ị ga-eji ya maka ụtụ isi. Mụ onwe m, ozi a dị mma maka ịlele ego m "ego" ugbu a na-eweta ọrụ iji mee mgbanwe ndị dị mkpa n'oge ọ bụla m chọrọ.
Ebates abịa dịka nchịkọta ihe nchọgharị maka gị ka ị nweta uru kachasị site n'iji ọrụ ego azụ. N'ezie, ị na-akwụrịrị ụgwọ zuru ezu ịzụta ihe ndetu ntanetị. Ya mere gịnị mere ị ga-eji jụ ịnweta ego enyere gị mgbe niile? Ebbs dị ezigbo mma iji mee ihe, na-enye otu bọtịnụ ihe nchọgharị (ma ọ bụghị, mmanya) iji nweta ncheta ozugbo maka ọzụta ọ bụla nke chọrọ ịmegharị ihe ngosi azụmaahịa. N'iburu n'uche na mgbatị ahụ dị na oghere na-emeghe, onye ahịa ibe m na-etu ọnụ na ihe dịka puku puku anọ na-adịbeghị anya na-echekwa na ọrụ azụmaahịa kwa ọnwa dị nnọọ ike, ọ dị mma?
Ya ọzọ tinye-na na ihe nchọgharị enyere ọtụtụ ndị na-ere na ogo ha na Amazon. Platinum Cleaner bụ ọrụ dị mfe ma na-arụ ọrụ nke nwere ike ime ka ọrụ dị egwu nke iji ngwaahịa tụnyere usoro ngwa ngwa ma dị mfe. Ngwaọrụ a na-enye gị bọtịnụ ụfọdụ na-apụta mgbe ụfọdụ na ibe weebụ nke ọdụm nke ndị isi ere ahịa. Na nkenke, mgbe ị hụrụ ngwaahịa maka ire ere, dịka ọmụmaatụ na Walmart, Cleer Platinum nwere ike ịnye gị otu mbiet ma ọ bụ nke yiri nke ahụ edepụtara na ebe ọzọ na Weebụ, gụnyere Amazon onwe ya, yana eBay. Kedu ihe ọzọ - ntinye ihe nchọgharị a nwere ike inye gị ego ọzọ, site na saịtị ọchụchọ na Amazon. Lelee ọtụtụ ụdị ire ere na ogo - ma nwee ike ịgba ọsọ ngwa-ngwa ma ị na-akwado njirimara, ma mara nke nchọta ọchụchọ ga-akacha mma ịmalite ịbanye n'ime Source .